Dracaena: esi kpoo osisi na ulo - Dragọn ozuzu - 2020
Ụzọ nke ozuzu dracaena n'ụlọ
Dracaena bụ osisi nkwụ nke Africa nke na-achọkarị ọfịs na ụlọ dị ndụ na ọmarịcha ụlọ ọ bụla.
Nke a bụ ebe obibi nke ebe okpomọkụ nke mara mma, nke ọtụtụ ndị na-elekọta ubi hụrụ n'anya.
Ị ma? Dị ka akụkọ akụkọ si kwuo, dike ahụ nwere obi ike jụrụ aka nke nnukwu onye nchụàjà. Nnukwu onye ụkọchukwu ahụra mkpanaka n'ala wee sị na ọ bụrụ na ụbọchị ise ga-apụta na ya, ọ ga-ahapụ nwa ya nwanyị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-egbu onye agha ahụ. Ya mere, onye agha ahụ ṅụrụ mmiri ahụ ruo ụbọchị isendien ke usen usen itiaha ọwọrọ ke enye. A manyere onye mmanye inye nwa ya nwanyi. Kemgbe ahụ, e nwere nkwenkwe na akụkụ nke oghere nke dratsen, nke ebibiri n'etiti abalị na ọnwa zuru ezu, na-eweta obi ụtọ n'ịhụnanya.
Esi agba dragọn osisi cuttings
Esi gbaa dragọn osisi ahụ ọkụ
Otu esi agha dracaena, gbanwee mmepe site na usoro seminal
Nkọwapụta ọtụtụ usoro site na nhazi ikuku
Kedu ka esi eto dragọn ahụ site na mpi
Oge kachasị mma maka dracaena ozuzu
Oge kachasị mma maka dracaena ozuzu bụ mmiri. Ma na oge okpomọkụ, a ga-eme ya ma ọ bụrụ na i mepụtara ọnọdụ niile dị mkpa.
Tụlee otú e si agba dracaena n'ụlọ na ihe uru na ọghọm nke usoro ọ bụla. Ụzọ kachasị mfe na ụdị dracaena kachasị dị na ya bụ apic na steam grafting nke dracaena.
N'elu osisi ahụ nwere ogologo osisi 10-15 cm na-egbutu ya mma. Ekwesiri ighota na ihe eji ebipu kwesiri idi ire ma ghara inwe ihe ogbugbo na ihe ozo. Ụdị osisi ahụ yiri ka mgbọrọgwụ karịa ire ere. A ghaghi igbutu osisi na mmiri ma obu aja.
A pụrụ itinye carbon na-arụ ọrụ na mmiri, ma ọ dị mkpa ịgbanwe ya mgbe ọ bụla 1-2 ugboro n'izu. Maka ịka mma, ị nwere ike iji ọgwụ ọ bụla, mgbe ahụ usoro ahụ ga-eme ngwa ngwa site na otu izu na ọkara. Mgbe ụbọchị 90 gachara, a malitere mgbọrọgwụ, a na-akụkwa mkpụrụ osisi na-adịgide adịgide.
Tupu ị kụọ dracaena n'enweghị mgbọrọgwụ, ị kwesịrị ịmara na ịgbanye na ọ ka mma n'ime ihe omimi: ájá, perlite, vermiculite. Ọ bụrụ na ị kpebie ịgbagha ọka na ájá, mgbe ahụ, ị ​​ga-ejikwa ihe na-akpali akpali. N'otu oge ahụ jide n'aka na mkpụrụ ahụ adịghị akpọnwụ.
Ọ dị mkpa! A naghị atụ aro dracaena cuttings na ala substrates, dịka ha na-adabakarị na rotting.
Usoro mgbọrọgwụ na-ewe nke ọma mgbe ikuku ikuku dị 20-22 ogo na okike nke griin haus. Enwere ike ịme griin ga-eji ike, ihe nkiri plastik ma ọ bụ kalama plastic. Ebe ọ bụ na osisi na-azụ site na epupụta tupu ebido, a ghaghị na-atụgharị ha ugboro ugboro n'ụbọchị na mmiri na-edozi. Otu ugboro n'izu n'ime mmiri maka ịwụgharị kwesịrị ịgbakwunye fatịlaịza maka nkwụ na usoro onu ogwu na-akọwapụta na ntụziaka.
Echefukwala ikuku griin ha kwa ubochi, nke a ga egbochi ikpo oku.
Ọ bụrụ na ị na-eji n'elu osisi maka apical cuttings, ma ọ bụ na ọ nwụrụ, na ogologo steam nọgidere, ị nwere ike mgba dracaena site na-eji bekee cuttings. A na-egbutu mkpuru osisi n'ime akwukwo ahihia na mma aka na mkpuru osisi 5-20 cm. Ntughari nwere ike ime n 'uzo ma o bu ihe obosara n'ime ihe ozo ma obu ala na ala nke 20-24 degrees. Nkpọrọgwụ na-agụnye ịkwanye ala nke ịcha na omimi nke 2-3 cm n'ime mkpụrụ mmiri. Ọ bụrụ na a na-eme mgbọrọgwụ na ala, ọ dị mkpa iji wụsa ájá 5-7 cm nke ukwu na ala nke ebe ezumike na-etinye ọnwu. Usoro a ga-azọpụta gị site na transplanting dracaena, nakwa site na mmerụ na-eto eto mgbọrọgwụ na cuttings.
Site na ntanetị, a na-egbuchasị mkpụmkpụ ma na-etinye aka na mkpụrụ mmiri, ebe a naghị ekpuchi nsọtụ ọnwụ. Mgbe a gbanyechara, a na-ebibi stalk akpanwa ahụ, osisi ahụ na-agakwa na-eri nri site na mgbọrọgwụ. Naanị ugbu a ọ nwere ike transplanted. Usoro a na-ewe ihe dị ka ọnwa abụọ.
E nwere ụzọ ndị ọzọ nke ịzụlite osisi a. Tụlee otú nkwụ na-abawanye ụba.
Mgbasa nke osisi site na osisi nwekwara ike, ma ọ bụ ihe dị ntakịrị, ebe ọ bụ na osisi ahụ na-adaba n'ụlọ. Akpa okooko osisi na-eme 8-10 afọ mgbe ọ kụrụ, na mgbe ufodu, mgbe e mesịrị. Ọzọkwa, ọ bụghị ụdị nile nke osisi a sitere na okooko. Ma osisi nwere ike zụrụ na ụlọ ahịa ifuru.
A ghaghị ime mkpesa site na mkpụrụ na February-March. Tupu ịgha mkpụrụ, a ghaghị itinye mkpụrụ osisi na onye nkwado nkwalite. Mgbe nhazi, a na-akụ ha na mkpụrụ osisi nkwụ, mmiri ma kpuchie ya na plastik. Mkpụrụ germination dị otu ọnwa abụọ na okpomọkụ nke ogo 25-27. N'oge a, ọ dị gị mkpa ijide n'aka na mkpụrụ ahụ adịghị akpọnwụ. Mgbe germination, ha na-aṅụ mmiri mgbe nile ma nye ha nri. Ozugbo ome osisi ahụ ruru mita 5 n'ịdị elu, ha nwere ike ịnọdụ n'ime ite ma legide anya dị ka osisi dragọn toro eto.
Karite nke ọma ịgha mkpụrụ osisi na akwa akwa akwa. Maka nke a, a na-ehicha ya, a na-etinye osisi na ya wee kpuchie ya. A na-edebe osisi ndị a na-agbanye n'ọkụ n'ebe a na-ekpo ọkụ. A na-edebe akwa akwa akwa mgbe niile ma na-ele anya maka germination. Ozugbo o na-epulite okpu, a na-akụ mkpụrụ na mkpụrụ. Usoro a bụ ngwa ngwa.
Ụzọ ọzọ a ga-esi gbasaa site na cuttings - na nhazi ọkwa ikuku. Ọ dị mfe karị ọbụnakwa maka ndị na-amalite. Ịkwesịrị ikpebi oke dị elu na ịchọrọ ịkụ osisi ma mee mbempe na steam ahụ. Ihe ọ bụla dị ntakịrị nke ga-egbochi nsị, dịka ọmụmaatụ plastic, etinye ya na mbepụ. Ihe mgbochi gburugburu eji akwa plastik mechie.
Ọ dị mkpa! Ihe nkiri ahụ na primer kwesịrị itinye aka na ogwe osisi. Anyị ji eriri siri ike dochie ya.
A ghaghị iji mmiri sirinji rụọ mmiri nke ala. Na mpaghara nke mbepụ, osisi ahụ kwesịrị ịmalite mgbọrọgwụ. Mgbe ha ruru nke ọma, a na-egbutu osisi ahụ ma kụọ ya n'ite dị iche.
Ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye mpi na-ekpuchi ekpuchi nke ị nwere ike itolite osisi nke obi ụtọ. A na-ejupụta aka na igbe mara mma nke na-arụ ọrụ nke ọkpụkpụ. N'ezie, nke a bụ dracaena nkịtị, ma usoro nke na-eto eto sitere na hemp bụ ihe na-adọrọ mmasị. Site na ala ala nke gbọmgbọm aghaghị iwepụ ya na paraffin. Kpachara anya ka ị ghara ime ka isi ala ala. Wunye mmiri n'ime ime ụlọ n'ime igbe ma tinye ogwe aka na akụkụ ahụ dị ọcha. E kwesịrị ịgbanwe mmiri mgbe niile ka ọ bụrụ mgbe niile.
Ka oge na-aga, ihe ga-apụta na mkpịsị aka, ma mgbe ọnwa atọ gasịrị - mgbọrọgwụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a kụrụ mkpuru osisi n'ala. Ọ bụrụ na mgbọrọgwụ anaghị apụta ruo ogologo oge, ịkwesịrị ịgbakwunye otu onye na-arụ ọrụ na mmiri. Kemgbe oge ochie, a na-ekwenyere na osisi nke obi ụtọ na-enweta ike na-ezighi ezi ma na-ewetara ọchioma.
Ị ma? A na-asụ dracaena okwu dị ka "dragon dragọn".
Dragọn na-etolite n'ụlọ gị, ị na-eto osisi nke obi ụtọ na-eme ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ.
Kedu ka esi eto paini fir na ibé
Na-egbu egbu, ma na-agwọ radish. Uru maka ahụ, na-eji ọgwụgwọ ọdịnala na cosmetology, contraindications
Dieffenbachia - ozuzu n’ụlọ
Njirimara bara uru nke rhubarb
Kedu ka esi eto thyme (thyme) na windowsill, na-akụ ma na-elekọta n'ụlọ
Igwe ojii na-acha odo odo na-acha uhie uhie nke phlox: 40 kachasị mma iji rụọ ọrụ na nhazi odida obodo
Lawn aeration: ihe ọ bụ, otu a, olee mgbe ọ ga - eme ya